ဗြိတိန်ရောက် ဆော်ဒီ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဆန္ဒပြခံရ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး ဗြိတိန်ရောက် ဆော်ဒီ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဆန္ဒပြခံရ
Britain's Prime Minister Theresa May (L) greets Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman (R) outside 10 Downing Street, in central London on March 7, 2018. British Prime Minister Theresa May will "raise deep concerns at the humanitarian situation" in war-torn Yemen with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman during his visit to Britain beginning Wednesday, according to her spokesman. / AFP PHOTO / Tolga AKMENTOLGA AKMEN/AFP/Getty Images
ဗြိတိန်ရောက် ဆော်ဒီ အိမ်ရှေ့မင်းသား ဆန္ဒပြခံရ
ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသားရဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း လူပေါင်း ရာနဲ့ချီကာ လန်ဒန်မြို့၊ ဒေါင်းနင်းလမ်းက ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် အိမ်ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူ ၁၅၀ ခန့်ဟာ ဆော်ဒီနိုင်ငံတွင်းက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ၊ ယီမင် ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဆော်ဒီအာရေဗျ ပါဝင်နေတာနဲ့ ဆော်ဒီကို ဗြိတိန်က လက်နက်တွေ ရောင်းနေတာတွေကို မကျေနပ်တာကြောင့် ဆန္ဒပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်ထဲမှာ အိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟာမက် ဘင်ဆယ်လ်မန်နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ထရီဆာ မေတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချိန် ဆန္ဒပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယီမင် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ဆောင်သူ နူရီယာ နာဂီက ယီမင် မိသားစုတွေ၊ အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးတွေ သတ်ဖြတ်ခံရတာ၊ ဗုံးကြဲခံရတာကို တွေမြင့်ခဲ့ရပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးက ဘာမှမလုပ်ဘဲ အသံတိတ်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဖျက်ဆီးခံရမှုတွေကြောင့် ယီမင် တနိုင်ငံလုံး ရစရာမရှိ ဖြစ်နေတာတောင် မကျေနပ်ကြသေးဘူးလားလို့ နာဂီက ပြောပါတယ်။
ဗွိတိနျရောကျ ဆျောဒီ အိမျရှမေ့ငျးသား ဆန်ဒပွခံရ
ဆျောဒီအိမျရှမေ့ငျးသားရဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံ ခရီးစဉျအတှငျး လူပေါငျး ရာနဲ့ခြီကာ လနျဒနျမွို့၊ ဒေါငျးနငျးလမျးက ဗွိတိနျဝနျကွီးခြုပျ အိမျရှမှေ့ာ ဆန်ဒပွခဲ့ပါတယျ။
ဆန်ဒပွသူ ၁၅၀ ခနျ့ဟာ ဆျောဒီနိုငျငံတှငျးက လူ့အခှငျ့အရေး အခွအေနေ၊ ယီမငျ ပွညျတှငျးစဈမှာ ဆျောဒီအာရဗြေ ပါဝငျနတောနဲ့ ဆျောဒီကို ဗွိတိနျက လကျနကျတှေ ရောငျးနတောတှကေို မကနြေပျတာကွောငျ့ ဆန်ဒပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဝနျကွီးခြုပျအိမျထဲမှာ အိမျရှမေ့ငျးသား မိုဟာမကျ ဘငျဆယျလျမနျနဲ့ ဝနျကွီးခြုပျ ထရီဆာ မတေို့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခြိနျ ဆန်ဒပွခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ယီမငျ ကလေးငယျမြား စောငျ့ရှောကျရေး လုပျဆောငျသူ နူရီယာ နာဂီက ယီမငျ မိသားစုတှေ၊ အပွဈကငျးတဲ့ ကလေးတှေ သတျဖွတျခံရတာ၊ ဗုံးကွဲခံရတာကို တှမွေငျ့ခဲ့ရပမေယျ့ ကမ်ဘာကွီးက ဘာမှမလုပျဘဲ အသံတိတျနတေယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဖကျြဆီးခံရမှုတှကွေောငျ့ ယီမငျ တနိုငျငံလုံး ရစရာမရှိ ဖွဈနတောတောငျ မကနြေပျကွသေးဘူးလားလို့ နာဂီက ပွောပါတယျ။
Previous articleမောင်တောမြို့မှာ ကျပ်သိန်း ၃၂၀၀၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးတွေ ဖမ်းမိ
Next articleမင်းသားလီနဲ့ အဆိုတော်ဆူဇီတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်